Valverde oo daaha ka qaaday aragtidiisa ku aadan dib u dhigista kulanka El Clasico – Gool FM
(Barcelona) 17 Okt 2019. Macalinka kooxda Barcelona ee Ernesto Valverde ayaa shaaca ka qaaday fikirkiisa kaga aadan in dib loo dhigo kulanka adag El Clasico ee dhex mari doono kooxaha Barcelona iyo Real Madrid illaa iyo bisha soo aadan ee Diseembar.
Waxaa dhawaan shaki la galiyay qabsoomida kulanka adag ee El Clasico, kaasoo ku asteysnaa in 26-ka bishan Oktoobar uu garoonka Camp Nou ku dhex maro kooxaha Barcelona iyo Real Madrid, sababa la xiriira xaalada siyaasadeed ee gobolka Catalonia oo ag midaan degeneen.
Haddaba tababare Ernesto Valverde oo maanta ka soo muuqday shir jaraa’id ayaa wuxuu ka hadlay fikirkiisa kaga aadan arrintan wuxuuna yiri:
“Ciyaarta waxaa loo qorsheeyay inay ka dhacdo 26-ka October garoonka Camp Nou, waxaana aaminsanahay in la ciyaari karo waqtigeeda iyo isla garoonka, dhib la’aan”.
“Taageerayaasha kooxda Barcelona way ixtiraamaan qof walba, sidaas darteed aan sugno oo aan aragno waxa dhaca, hubaalna waxaa jiri doona xilli la ciyaari doono kulanka El-Clasico”,
“Sannadkii hore waxaa jiray warar badan ee ku aadanaa in lagu ciyaari doono magaalada Miami ee dalka Mareykanka, ugu dambeyntiina laguma ciyaarin halkaas”.
“Barcelona mar horeba waxay soo saartay war rasmi ah oo arintaas ku saabsan, in lagu ciyaaro kulanka soo aadan ee El Clasico Santiago Bernabéu uma aragno inay ku haboon tahay, sida caadiga ah waa in kulanka aan ku ciyaarnaa garoonkeena”.